Sunday September 19, 2021 - 12:35:42
Tixanahan oo ilaa hadda aan ka daawaday afar qaybood, welina ay qaybo kale dhiman yihiin sida ka muuqata, ayaa waxaa soo saaray Xarakada Al-Shabaab oo dagaal kula jirta maamullada Soomaalida ah ee dalka ka jira iyo taageerayaashooda dowladaha iyo ururada ajanabiga ah.
Inkasta oon ahay nin waayabadan soo noolaa, wadamo badan soo maray, siyaasada Soomaaliyana aad ula socday, hadana waxa ugu horeeya een ka faa’iiday muuqaaladan iyaga ah waa inaan ogaaday waxyaalo badan oo iga daahsoonaa marka laga hadlayo durtuurka Soomaaliya.
Waxaan hubaa inay jiraan dad badan oo Soomaali ah oo aniga ila mid ah, kuwaas oo aanan wax badan ka ogeyn waxa uu dustuurka Soomaaliya ku salaysan yahay, cidda soo dejisay, heerarka uu soo maray, iyo waxa ay ka yiraahdeen culumada Soomaaliyeed ee ku xeeldheer diinta Islaamka.
Bilawgii Dustuurka Soomaaliya.
Arinta fajacisada igu noqotay waxay ahayd inaan ogaaday in dustuurkii ugu horeeyay ee ay Soomaaliya yeelatay uu ahaa mid uu Talyaanigu soo qoray, Soomaaliduna ay saxiixday oo aqbashay wixii uu gumaystuhu soo qortay. Xogtaas waxaa sheegay rag farabadan oo lagu soo qaatay taxanaha ayna kamid yihiin Professor Gaandi oo hore usoo noqday wasiirkii gaashaandhiga ee dowlada Soomaaliya.
Gaaladu guud ahaan iyagaa kala xagjirsan, kalana cadawsan oo diinta kala necebe, ninka sida gaarka ah u qoray dustuurkii ugu horeeyay ee Soomaaliya ay yeelato wuxuu ahaa nin Yuhuudi ah oo magaciisa lagu sheegay Shibroon. Xogtaas waxaa taxanaha ku sheegay Sheekh Cali Mataan oo ilaa maanta nool, isaguna wuxuu kasoo xigtay Abuukaate Gabyoow oo ahaa ninkii Shibron kala qaybqaatay qorista Durtuuska Soomaaliya.
Waa arin aad looga naxo in dustuur wax badan lagu soo dhaqayay bulshada Soomaaliyeed aanan si toos ah loogu sheegin bulshada halka markiisii hore laga soo minguuriyay, taas badalkeedana looga dhigay wax ay Soomaalidu gacanteeda ku qoratay, isla markaana aan ka hor imaanaynin diinta Islaamka.
Culumada ka hadashay gaalnimada dustuurka Soomaaliya.
Qof walba oo damiir Islaamnimo leh qarracan ayay ku noqonayaa marka uu daawado culumada Soomaaliyeed ee horey uga hadashay dustuurkan isaga ah, sida Sheekh Maxamad Macalin, Sheekh Boqolsoon, Sheekh Maxamad Rashaad, Sheekh Cumar Faaruuq, iwm, balse nasiib darro hadalladooda aysan usoo gaarin bulshada sidii loogu baahnaa, dad badana ay sidaas ku dhumeen.
Maadaama taxanaha lagu cadaynayo gaalnimada dustuurka Soomaaliya uu soo saaray ururka Al-Shabaab, waxaan filayay in dhamaan culumada ka hadlaysa arimahaan ay noqon doonaan kuwa Al-Shabaab oo kaliya. Inkastoo ay arintaasi wax ceeb ah lahayn oo diintu mid qura tahay qof walbana lagu qiimaynayo daliilka uu u haysto xujooyinkiisa, hadana arinku sidaan moodayay ma noqon.
Culumada Soomaaliyeed ee ka hadlaysa gaalnimada dustuurka Soomaaliyeed waa kuwo aad u farabadan. Qaarkood waxaa ay geeriyoodeen intii aanan la aas-aasin xarakada Al-Shabaab, qaar kale weli waa ay noolyihiin balse ma aha xubno ka tirsan Al-Shabaab. Qaar kalena waa culumo hada la saf ah xarakada. Halkaas waxaa iiga soo baxday in arintu ka weyntahay khilaaf u dhexeeya Al-Shabaab iyo dawlada, balse ay tahay mas’alad diin ah oo in muddo ah soo taagnayd, culumaduna kuwoodii hore iyo kuwooda dambe intuba ka wada hadleen.
Maxaa la gudboon bulshada Soomaaliyeed?.
Ilaahay subxaanahu watacaalaa wuxuu qof walba siiyay garaad iyo maan uu ku fikiro, kuna kala saaro wixii xun iyo wixii saxan intaba. Anigu shakhsi ahaan markii aan dhuuxay nuxurka hadallada ku jira taxanaha " Saa’a maa yaxkumuun” waxaa iisoo baxday inay jireen, welina jiraan, khaladaad xooggan oo ku jira dustuurka Soomaaliya, aysana jirin cid qiil u samayn karta in durtuuskaas wadanka lagu dhaqo, wadaad iyo waranle kuu doono ha ahaadee.
Anigu waxaan cadaynayaa inaan ka tawbad keenay, Ilaahayna cafis ka waydiisanayo, khalad walba oon horey ugu dhacay ama difaac walba oon maalin maalmaha kamid ah difaacay qodob kamid ah dustuurkaas. Waxaan cadaynayaa inaan wixii maanta ka dambeeya la iga maqli doonin wax la yiraahdo dustuur Soomaaliyeed iyo dimuquraadiyad. Waxaan cadaynayaa in aan ku qanacsanahay, aaminsanahay, raacsanahay, in dustuurka kaliya ee aan leenahay uu yahay kan Ilaahay noosoo dejiyay, wixii kasoo harayna aan diidanahay kana soo horjeedo.
Bulshada Soomaaliyeed, dal iyo dibad halkii ay joogaan, waxaan kula talinayaa inay taxanahaas daawadaan, si wanaagsana u dhuuxaan. Muhiim ma aha inaad Al-Shabaab jeceshahay ama necebtahay. Waa mustaqbalkaaga aakhiro ood badbaadsanayso hadii aad tahay qof Muslim ah oo diintiisa jecel. Waxaa ku jira xogo aad u muhiim ah oo naga maqnaa balse maanta banaanka yaalla.
Ugu dambayntii waxaan leeyahay, dadkaygoow wax badan baan ku kadsoonay dustuurka Shibron, hadase waa baa noo dilaacay, bilicsan iyo aroosyo baxsan.
W/Q: Garaad Daahir Cali Sheekh
FG: Ra'yiga maqaal qoraha ayuu ugaar yahay SOMALIMEMO looma tiirin karo
Haddii aad doonayso in aad daawato afarta muuqaal ku saabsan dastuurka dowladda ee alkataa'ib baahisay hoos ka daawo
Daawo: Xalqada 7aad ee Muuqaallada lagusoo bandhigayo xummaanta qawaaniinta lagu dhaqo dalka
DAAWO Qeybtii 4aad ee Taxanaha lagu faaqidayo Dastuurka iyo Qawaaniinta ay ku dhaqanto DFS